ဖိုရမ် အထိမ်းအမှတ် ကီးချိန်း [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ > ဖိုရမ် အထိမ်းအမှတ် ကီးချိန်း
View Full Version : ဖိုရမ် အထိမ်းအမှတ် ကီးချိန်း
ကျမတို့ ဖိုရမ်လည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်နော်
ဖိုရမ်မန်ဘာတွေလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးလာတာ ပျော်စရာပါ။
ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းအနေနဲ့ ဖိုရမ်အမှတ်တရ ကီးချိန်းလေး ဖန်တီးဖို့ ကျမ အကြံရလိုက်ပါတယ်။
ကီးချိန်းလေး ကိုင်ထားတာ မြင်တိုင်း MEF မန်ဘာ အဖြစ် ထင်သာ မြင်သာ အောင်ပေါ့။
ရန်ကုန်က မန်ဘာတွေ တွေ့ဆုံပွဲ အမှီ မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျမ တွေးတောကြံစဉ်ထားတာလေးကို အရင် နမူနာ ချပြပါမယ်။
မန်ဘာအားလုံးရဲ့ အကြံဥာဏ် စိတ်ကူးလေးတွေကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကီးချိန်းလေးရဲ့ အရွယ်အစားကို အလျား ၂လက်မ အနံ ၁လက်မ လျာထားပါတယ်။
တစ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဖိုရမ် ဘန်နာ ဒီဇိုင်လေးကို လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ( လက်ခံတယ်ဆိုရင် ကိုရာမညရေ မူရင်း JPED ဖိုင်လေး ပို့ပေးပါလား။ ဆိုဒ်လေး နည်းနည်း ပြင်ချင်လို့ပါ)
နောက်တစ်ဘက်မှာတော့ ဖိုရမ်ကို စတင်တည်ထောင်သူ ကိုရေခါးရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးနဲ့ ဖိုရမ်ရဲ့ လင့်လေးကို ထင်သာ မြင်သာအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဒီဇိုင်းလေးဟာ ကျမ စဉ်းစားထားမိ လျာထားတာလေးပါ။
ဘယ်လို Create လုပ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်လေးများကို မျှော်လင့်လျှက်
ပထမဆုံး Banner Design က မ KPZ လုပ်ချင်တဲ့ 2:1 အချိုးမကဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ 2:1 ထဲမှာဝင်အောင်ထည့်ရင် Ratio ပျက်ပါမယ်။ (စိတ်ထဲမှာ ဒေါင်လိုက်အနားကို ၂လက်မ အချိုး ၁လက်မလောက်ထိ ဆွဲချုံ့ ကြည့်လိုက်ပါ) ထင်သာမြင်သာ ပြောရရင် စာလုံးလေးတွေက၀ိုင်းမနေတော့ဘဲ ဘဲဥပုံဖြစ်သွားပါမယ်။ Ratio ကို Constant ထားရင် အနားတွေပြတ်ကုန်ပါမယ်။ ဆိုလိုချင်တာက key chain ကို ၂း၁ လျာထားရင် အဲသည်အချိုးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခု ပြန်လည် တည်ဆောက်ရပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက ကီးချိန်းလေးကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေမြင်ရရင်တောင်မှ ဥပမာ လိုဂိုလေး ထင်ရှားနေတာမျိုး MEF ဆိုတာလေးထင်ရှားနေတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ပြင်မလို့ ကိုရာမညဆီက Original Photo လေး တောင်းနေတာ
အခုဟာ က ဘန်နာကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပီး ထင်တားတာ
http://img707.imageshack.us/img707/9223/secondpirority.th.png (http://img707.imageshack.us/i/secondpirority.png/)http://img687.imageshack.us/img687/3159/mefbannerstyle2.th.png (http://img687.imageshack.us/i/mefbannerstyle2.png/)http://img717.imageshack.us/img717/7059/mefbanner2.th.png (http://img717.imageshack.us/i/mefbanner2.png/)http://img11.imageshack.us/img11/5515/mefbannerwithoutlogo.th.png (http://img11.imageshack.us/i/mefbannerwithoutlogo.png/)http://img210.imageshack.us/img210/7182/12574489.th.gif (http://img210.imageshack.us/i/12574489.gif/)
http://img97.imageshack.us/img97/3636/firstpiroritybannerwith.th.png (http://img97.imageshack.us/i/firstpiroritybannerwith.png/)http://img690.imageshack.us/img690/2439/82269327.th.png (http://img690.imageshack.us/i/82269327.png/)http://img710.imageshack.us/img710/4120/10ekns2.th.png (http://img710.imageshack.us/i/10ekns2.png/)http://img100.imageshack.us/img100/6049/meflogodesignwithmef2by.th.png (http://img100.imageshack.us/i/meflogodesignwithmef2by.png/)
http://img87.imageshack.us/img87/4250/122kj6q.th.png (http://img87.imageshack.us/i/122kj6q.png/)http://img704.imageshack.us/img704/1483/92299735.th.png (http://img704.imageshack.us/i/92299735.png/)http://img704.imageshack.us/img704/8417/65637251.th.png (http://img704.imageshack.us/i/65637251.png/)
ပုံရှိတာ တင်ပေးလိုက်တယ်အမ ... အစီအစဉ်မကျဖြစ်သွားတယ် :4:
ကျွန်တော်လဲ ကီချိန်း တစ်ခု လုပ်ဖူးတယ် (ဂျီတီယူအွန်လိုင်းအတွက်) ဒီဇိုင်း နဲ.ပုံစံ နမူနာလေး ကြည့်လို.ရအောင် ဒီမှာ တင်လိုက်မယ်နော် ။
ပလက်စတစ်နဲ. လုပ်ထားတာ တစ်ခုကို ၃၀၀ နဲ.ရောင်းတာပါ ။
အကူအညီလိုရင် ပြောနော် ... မမတို့ ကိုကို တို့...:4:
အသင်းဝင် မန်ဘာအားလုံးကို ဖိုရမ်ကီးချိန်းလေးအတွက် ဒီဇိုင်း စဉ်းစားထားတာလေး ပြပါမယ်။
အားလုံးသဘော တူတယ်ဆိုရင် ကီးချိန်းစတင် ထုတ်ဝေပါတော့မယ်
No friends! No Keep in Touch! !No Keep in Touch! !No Disscussion!
No Disscussion! No Forum! No Forum! No MEF!
ကိုသုံးဖို့ အတည်ပြုမယ် ဆိုရင်တော့ ...
No Friends, No Keep in Touch! No Keep in Touch, No Disscussion!
No Disscussion, No Forum! No Forum, No MEF!
ကီးချိန်းလေးက ကောင်းပါတယ်။ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ zeroff ပြောသလို စားသားလေး စဉ်းစားကြည့်ပါဦး...
ဒုတိယပုံမှာပါတဲ့ ESTABLISHED ဆိုတာနဲ့ အပေါ်ဘောင်(အနားသတ်) အကွာအဝေးရယ်
www.myanmarengineer.org ဆိုတာနဲ့ အောက်ဘောင်(အနားသတ်) အကွာအဝေးရယ်ကိုတော့ ပြန်ချိန်ကြည့်ပါဦး...
imagesuck ကနေ တင်ထားပေးလိုက်တယ်ညီလေး ။ မြင်ရလားတော့မသိဘူး ။
ကီးချိန်းလုပ်မဲ့ အစီအစဉ်က ပြီးသွားတာလား မပြီးသေးတာလားဟင်။ ကီးချိန်းလုပ်ပြီးရင်လည်း ဘယ်လို ရနိုင်မလဲဆိုတာရယ်၊ မလုပ်ရသေးရင်လည်း ဆက်လုပ်ပါလို့ အားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျ။ တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။
ကီးချိန်းက မလုပ်ရသေးတာပါ။ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဖိုရမ်မှာ ကြေငြာပေးမှာပါ။
ယူဖို့ကလည်း စီစဉ်ပေးမှာပါ။ စင်ကာပူ မန်ဘာအတွက်ရယ်
ရန်ကုန်မန်ဘာအတွက်ရယ် ၊ မန်းဒလေးနဲ့ တခြားနယ်က မန်ဘာများအားလုံးရယူနိုင်အောင်
ကိုရာမညနဲ့ ကိုချစ်တီးရေ ...
ကီးချိန်းလုပ်ရတော့မလား ... :P
ကျန်တဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေမပါဘူးလား?၊ key chain ရဖို့စကာင်္ပူပြောင်းရင်ပြောင်း၊မပြောင်းရင်ရန်ကုန်ပြန်ရမလိုဖြစ်နေပြီနော်...။
အမ နီနီမာ ရေ..ပါပါတယ်နော်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံး ( အဟီး..အဲလိုသုံးလိုက်မယ်နော်)မှာရှိတဲ့
သူငယ်ချင်းမန်ဘာများအားလုံးရအောင် စီစဉ်ပေးမှာပါ။ ရေးတာလိုသွားလို့ပါ အမ။
ပို့ပေးမယ်နော် အမ။ စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ အမ။
အမရေ .. ကီးချိန်းဒီဇိုင်းကတော့ ကောင်းပါတယ်အမ။
ဒီဇိုင်းကို အမတို့ပဲဆွဲပြီး အတည်ပြုလိုက်ပါအမ။
လုပ်ဖို့ကတော့ အမတို့ ရယ်ဒီဖြစ်ရင် လုပ်နိုင်ပါတယ်အမ။
key chain ရဖို့စကာင်္ပူပြောင်းရင်ပြောင်း၊မပြောင်းရင်ရန်ကုန်ပြန်ရမလိုဖြစ်နေပြီနော်...။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်ကတော့ MEF အမှတ်တရ ဒီကီးချိန်းလေးကို အရမ်းလိုချင်နေပါတယ်....
အခုကတည်းက စိတ်ကူးထဲမှာကို အရမ်းတန်ဖိုးထားနေပါတယ်ဗျာ...
ဒီကီးချိန်းရဖို့ ရန်ကုန်ကို လာယူရမယ်ဆိုရင်တောင် လာယူပါ့မယ်...(တကယ်က ခွင့်မရဘူးဗျ) :4:
အိုဗျာ... မရရတဲ့နည်းနဲ့ ယူမယ်ဗျာ.... :angry:
စလုပ်ပြီဆို ကျွန်တော့်ဆီသာ Mail ပို့လိုက်ပါ...
ဒီနေပြည်တော်ကနေပြီး ဘာကူညီပေးနိုင်မလဲ.. လှမ်းသာပြောလိုက်ပါဗျာ...
ဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော် ပို့စ်တွေကလွဲလို့
အခု ကီးချိန်းလေး လုပ်မယ်ဆိုတော့...ကျွန်တော်နေပြည်တော်ဘက်က
တာဝန်တွေကို ယူခိုင်းမယ်ဆိုရင် ယူလို့ရပါတယ်....
than htwe 11
ဒီတကြိမ်တော့ MEF ကီးချိန်းလေး တကယ်ထွက်ပေါ်လာတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်။
ကျနော် ဖိုတိုရှော့မလုပ်တတ်လို့ စိတ်ကူးရသလိုလေး ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကြိုးလေးတွေနဲ့လား အတိုလေးဘဲလား စသည်ဖြင့် မြင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပါ။
အဓိကကတော့ chain ကြိုးနဲ့နဲနဲအရှည်လေးဆိုရင်လဲ quality ကောင်းကောင်းလေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အဆစ်တွေက ပြုတ်ပြုတ်တတ်လို့ပါ။
နောက်ပြီး သော့တွေထည့်တဲ့ ကွင်းလေးတွေကိုရောပေါ့ ။
တဘက်ဆီမှာတော့ ဟိုးအရှေ့ဆုံးမှာ KPZ ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့စာလေးတွေနဲ့ဆိုလဲ ကောင်းပါတယ်။
ကို chittee ရေ
ပြထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက အရမ်းလန်းပါတယ်..
အားလုံးလဲ သဘောကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
ကီးချိန်းဆိုတော့ ကြိုးလေးက ကို chittee ပြောသလို
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မြန်လေး လိုချင်နေပြီဗျို့....
အကိုရေ ဒီဇိုင်းလေးကတော့လန်းပါတယ် ဗျာ ... လိုချင်ရင် ဘယ်သူ့ ကို ဆက်သွယ်ရမှာလဲ အကိုရေ ... လုပ်ပါဦး ..။
အကိုရေ ဒီဇိုင်းလေးကတော့လန်းပါတယ် ဗျာ ... လိုချင်ရင် ဘယ်သူ့ ကို ဆက်သွယ်ရမှာလဲ အကိုရေ ... လုပ်ပါဦး ..။
၂ ပတ် ၊ ၃ ပတ် အတွင်း ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဒယ် ပေးတော့မယ်ပေါ့။ အစ်ကိုတီး တားတားလေးပုံပါ ပါရင် ပိုကောင်းမယ်နော် ဟီး :2:
မန်းမန်ဘာတွေ ရရင်လည်း အနော့်ကို မမေ့ကြနဲ့နော်
မန်းလေး ကမန်ဘာတွေက တစ်ခုပိုယူထားလိုက်တော့
ကိုယ်တော်ချောအတွက် ဟုတ်လို့ လား
ကျေးဇူးရှင်လေးရယ် မရက်စက်ပါနဲ့နော် ယူပေးထားပါကွယ်နော်
အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပြန်လဲပေးမယ်လေနော် တောင်ပေါ်က ဘာလိုချင်လဲပြော
သားဖို့လည်း ယူပေးကြလေ မပါလို့ကတော့ စိတ်ဆိုးမှာနော်... :angry: :angry: :angry:
ဖိုရမ် အထိမ်းအမှတ် ကီးချိန်း အခု (300) ကိုသိုးကျောင်းသား ဆီမှာရှိပါတယ်။
မန်းဒလေး နဲ့ နေပြည်တော် မန်ဘာများအတွက်ဘယ်သူတာဝန်ယူပြီး
လက်ခံပေးမလဲ သိချင်လို့ပါ။ ရန်ကုန်မန်ဘာများအတွက်တော့ ကိုသိုး ဆီမှ တဆင့် ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ တစ်ခုမှာ ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
မန်းဒလေး နဲ့ နေပြည်တော် အတွက် အရေအတွက်ဘယ်လောက် ပို့ပေးရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
သုံး ရာမကပါဘူး အမနေညိုရေ
လေးပွကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၃၀ ပါ သွားယူရပါဦးမယ်..
အားလုံး ငါး ရာ ကျော်ပေါ့ ..
ဘယ်ကိုဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာလေး တစ်ချက် ပြောပြပါဦး ဗျာ
(မန်းလေးက မမ်ဘာတွေလဲကီးချိန်းကိုဘယ်သူလက်ခံပေးနိုင်မလဲ )
ဟုတ်ကဲ့ပါ...နေပြည်တော်နဲ့ မန်းဒလေးမှ လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ မန်ဘာ ရှိရင် ဒီမှာလာရောက် အားပေးကူညီပါဦးနော်။
နေညို တို့ပို့ပေးပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်မန်ဘာအချင်းချင်း အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ လက်တို့ပေးကြဦးနော်....( with PM) ။
နေပြည်တော်အတွက် ဟိန်းလေး ယူထားပေးလို့ရပါတယ်
၁. ကိုမင်းအောင် (min aung)
၅. ကို Willim Paul
ကျန်နေခဲ့သူများရှိရင် လာရောက်ရေးပေးနိုင်ပါတယ်..(with PM)
ကျမလည်းလိုချင်ပါတယ်ရှင်.... ကိုသိုးဆီက ယူရမှာလားသိပါရစေ.... ယူမယ်ဆို ဘယ်မှာယူရမလဲပါပြောပေးပါနော်
နေပြည်တော် နဲ့မန်းလေး ကလွှဲပြီး တခြားမြို့ က မန်ဘာတွေက မရနိုင်ဘူးလား။ :? :?
ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြီး ယူရမှာလဲ။
Alyssa လည်းလိုချင်လို့ ပါ။
မောင်သိုးရေ မန်းလေးအတွက်က ငါတာဝန်ယူလက်ခံပေးပါ့မယ်.......မန်းလေးမန်ဘာကတော့လူနည်းတယ် နောက်တိုးလာမဲ့သူတွေအတွက်ပါဆိုရင်တော့
ဟိန်းလေး နဲ့ poohcartoon တို့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကီးချိန်း ကိုတော့ MEF မန်ဘာဝင်များ ကို တစ်ခု စီ ဝေပါမယ်။
တစ်ခုထက် ပိုပြီးလိုချင်ခဲ့ရင်တော့ 500 ကျပ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
တခြားနယ်က မန်ဘာများအတွက်ကတော့ အရေအတွက်များရင် ကားဂိတ် ဒါမှမဟုတ် လူကြုံနဲ့ပို့ပေးပါ့မယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး PM နဲ့ ပေးပို့ဆက်သွယ်ပေးပါ။
မန်းဒလေး အတွက်က တော့ ကားဂိတ် နဲ့ ပို့ပေးပါ့မယ်။ ပို့ပေးရမဲ့ နာမည် နဲ့ လိပ်စာ ကို မ poohcartoon က ပြောပေးပါဦးနော် ( with PM) ;D ;D(ပိုစ့်တွေ ဖေါင်းပွကုန်မှာစိုးလို့)
ပို့ပေးမဲ့ အရေအတွက်ကို တော့ မ KPZ &amp; ကိုချစ်သီး တို့တွေဆီက confirmation ယူလိုက်ပါဦးမယ်။
မ poohcartoon နဲ့ ဟိန်းလေး ကလည်း အရေအတွက်လေး ခန့်မှန်းနိုင်ရင် တစ်ချက်ပြောပေးပါဦးနော်။
စင်ကာပူ က ကျန်ခဲ့တဲ့ 230 အတွက်ကို လိုအပ်ရင် ထပ်ပို့ပေးရဦးမှာ မို့လို့ပါ။
ရန်ကုန်မန်ဘာ များကီးချိန် ယူဖို့က ခဏစောင့်ပေးပါနော်။
ကျွန်တော်တို့ နေပြည်တော်က ဖိုရမ်မမ်ဘာများကိုယ်စား (မှတ်မှတ်ရရ) တာဝန်ယူပေးတဲ့ မဟိန်းလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
ပြီးတော့ တဆင့်ခံ ဖြန့်ဝေသူလိုရင်လဲပြောပါ.. ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်... ::) ::)
(&quot;တဆင့်ခံ ဖြန့်ဝေသူ&quot; ဒီလိုပြောရတာ တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျာ.. တကယ်ဆို ဖိုရမ်အတွက်ဆို အချိန်ပေးနိုင်ရမှာပေါ့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြောမိပါတယ်..) :-[ :-[ :-[
ခဏပဲစောင့်မှာနော်..အကြာကြီးတော့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး............... &gt;:( &gt;:( &gt;:( &gt;:(
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခု ယူပါမယ်ခင်ဗျာ..
တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ..ကီးချိန်း ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျာ..
သူငယ်ချင်းတွေ ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပြောလို့ရအောင်ပါခင်ဗျာ..
500 kyats ပါ ။ ကိုဖန်ဆင်းရှင်။
ကီးချိန်းယူဖို့ ဟိန်းလေး နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပါနော်။ နေပြည်တော် branch အတွက် ဟိန်းလေးတာဝန်ယူထားပါတယ်။
ကျွန်တော် PM ပို့တာ အဆင်မပြေလို့..
အခု ပို့စ်မှာပဲ ရေးလိုက်ရခြင်းပါ..
MEF ကီးချိန်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီး ယူရမလဲခင်ဗျာ..
ရန်ကုန်မင်ဘာတွေနဲနဲစောင့် ဆိုတော့ 
ညီမလေးရေ..လက်ရှိကတော့ မောင်လေး သိုးကျောင်းသား ဆီမှာ ကီးချိန်းတွေရှိပါတယ်။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ သိုး ကိုဆက်သွယ်ပြီးရယူရင်လည်းရပါတယ်။
သိုး လည်း သိပ်မအားတာနဲ့ အဲလို တစ်ယောက်ချင်းစီလာယူရင် အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ ခဏစောင့်ခိုင်းတာပါ။
အမ က seminar တခု မှာ ချိန်းပြီး ဝေလိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ seminar တခုက အဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့ပါ။
ရန်ကုန်က မန်ဘာများ လိုချင်ရင် သိုး ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
[ :-[ :-[
ဟဲ့ဟဲ့ ကလေးတွေ အော်..နေအုံး အဲလ်မှားပီး ဒေါ်ဂွက်ထော်နဲ့ ဟီး
အဲလိုမှားတာ ယောလေးပါ မှတ်ထားနော် ..
မဟိန်းလေးကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ သားလဲယူချင်တယ် တစ်ခုလောက် အလကားလားဟင် ( စတာပါ)
သားမှာတော့ဖုန်းမရှိဘူး သား ချစ်ချစ် နုနုထွဋ်ထွဋ်လေးမှာရှိတယ်.. မျက်နှာလုပ်ချင်လို့ပါ ဟဲ ဟဲ မြန်မာလိုပြောရင် ပိုးကြေးပန်းကြေးပေါ့ဗျာ..
လုပ်ပါ အန်တီ (ဘယ်အရွယ်မှန်းမသိလို့ ရွှဲ့ခေါ်သည် အဲလ် မှားခေါ်သည်) တားလဲ တစ်ခုလောက် လိုချင်လို့ပါ tanyawzinlwin007@it4mm.net ပါ ဆက်သွယ်ရလွယ်အောင် မရရင်တော့ နေပြည်တော် လှန်ပစ်မှာနော်..
ကျွန်တော်လည်း နေပြည်တော် ရောက်နေတဲ့ မန်ဘာပါ။ ကီးချိန်းလိုချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဗျာ။
ဖိုရမ် အထိမ်းအမှတ် ကီးချိန်း ဆိုတာ ဘာတုန်းဗျ နားမလည်လို့
ဘယ်လိုရှင်းပြရမလည်း ကိုမသိတော့ဘူး ..:p
ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ် အမှတ်အသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အမှတ်တရ ကီးချိန်းလေးပါ ...
ဘယ်လိုဖြန့် ဝေမယ် ဆိုတာကတော့ ရှေ့ကပိုစ့်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါအုန်း ...
လိုချင်တယ် ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့ အလိုက် ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူတဲ့ သူတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး
Myanmar Engineer Forum (MEF) Logo နဲ့ စာတမ်းလေးတွေပါတဲ့ MEF အထိမ်းအမှတ် သော့ချိတ် ကိုပြောတာပါ ။
လောလောဆယ် လိုချင်တဲမန်ဘာတိုင်းကို တခုစီ အလကားပေးဖို့တော့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ တခုထက်ပိုလိုချင်ရင်တော့ ၀ယ်ယူရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ (http://goo.gl/d5jt5) ... NayNyo ဆွေးနွေးထားတာလေး ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူများတွေဆွေးနွေးထားတဲ့ အရှေ့ကပို့စ်တွေကိုလဲ လိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်သင်တန်းက ၁၇ ရက်နေ့ည ၈ နာရီကားနဲ့ သွားရမယ်လို့ ဒီနေ့မှသိတယ်..
မသွားရတော့ဘူးလို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အကျိုးအကြောင်းလာပြောတာ.
အခု အစီအစဉ်က ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့..အဆင်ပြေသွားတာပေါ့..
ကျွန်တော် ဒီညနေ(၁၇) ၅း၃၀ မြို့မဈေး YKKO ကိုလာခဲ့ပါ့မယ်..ည ၈ နာရီကားထွက်မှာဆိုတော့
ကွက်တိပါပဲ..ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင် 09-49235588 ကိုကျော်စိုးနိုင် ဆိုရင် ရပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေပူတော်မန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲလေး အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်သွားပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ :dance:
(၁) ကိုမင်းအောင် (ဒကား)
(၃) ကိုWillian Paul
(၅) ကျွန်တော် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
တွေ့ဆုံပွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ တွေ့ဆုံပွဲ ပုံလေးတွေ လုပ်ပါဦး.... နေပူတော် မန်ဘာတွေကို အားပေးချင်လို့:clap2::clap2::clap2::clap2:
နေပြည်တော်မန်ဘာတွေအတွက် ကီးချိန်း စုစုပေါင်း ( ၂၈ ) ခုကို အကိုzinmaung ဆီမှလက်ခံရရှိပါတယ်
ပေးလိုက်တာက (၂၉)ခုပါ အကို zinmaung က ရန်ကုန်ခွဲတမ်းက မယူပဲနဲ့ ဟိန်းလေးဆီက ယူသွားပါတယ်။:noidea: လူဇိုး
နေပြည်တော် မန်ဘာစုစုပေါင်း ( ၅ ) ခု
လက်ဆောင်ပေးဖို့ရောင်းရတာ( ၁၂ ) ခု စုစုပေါင်း (၁၇)ခုပါ။
ပုသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ မန်ဘာဝင်အတွက် နေပြည်တော်ခွဲတမ်းထဲက ခွဲပေးဖို့ မမခိုင် နဲ့ မနေညိုဆီကခွင့်ပြုချက်ယူခဲ့ပါတယ်။
ပုသိမ်မှာရှိတဲ့ အကိုသေးသေးလေး Little 3278 အကိုzayyarsoe (၂)ဦးအတွက်နဲ့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ (၃)ခု စုစုပေါင်း(၅)ခုကို လူကြုံနဲ့ ကိုသေးသေးလေး ဆီကို ထည့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းလေပြည်အတွက် (၁)ခုသပ်သပ်ဖယ်ထားပြီး လက်ကျန်ကီးချိန်း ( ၅ )ခုရှိပါတယ်။ မနေညို နေပြည်တော်လာရင် ကီးချိ်န်းရောင်းရတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေ ရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်
အစ်မနေညိုရေ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ဖို၇မ်ဝင်ရခက်နေလို့ အကောင့်အသစ်တစ်ခုနဲ့ဝင်လိုက်တာပါ
21-12-2010 နေ့က ကီးချိန်း အခု50လက်ခံရရှိပါတယ်
4.faelover ( မန်းလေးမန်ဘာ ပါပဲ)
(7)ခုနဲ့ မောင်လေးမောင်သံရောင်းဖို့အတွက်ယူသွားတာ (6)ခုပါ။အားလုံး (13)ခုပါ...
လောလောဆယ် ဒါပဲရှိပါသေးတယ်။ ခုကျန်ရှိနေတာက (37ခု) ဒီနေ့အထိကျန်ရှိနေပါတယ်..ကျန်ရှိတဲ့သူများ poohcartoon (Ctiy NEt Internet Access) မြို့သစ်(1)သွားဆေးတက္ကသိုလ်နဲ့မျက်စောင်းထိုး ဆိုင်မှာ လာယူကြပါလို့..........သတင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်
hinn nu က ရန်ကုန်မှာဘဲ မဟုတ်လား ....
နေညို (NayNyo) ကိုဆက်သွယ်ပြီး ယူလိုက်ရင်ရမှာပါ ....
plz,help me , i want too, so so how can i contect to ko tho kyaung tha , i'm at yangon plz :(
:peace: ဘာလိုလိုနဲ. ဖိုရမ် (၃)နှစ် ပြည်. ကြတော.မယ်နော်.....ဒီနှစ်ကော....ကီးချိန်း လုပ်အုံးမှာလား.........မနှစ်က လုပ်တာ အနော် လဲ ရလိုက်ဘူး......MEF ကီးချိန်းလေးကို အနော် လဲ လိုချင်တာပေါ........ဒီနှစ်ရော လုပ်အုံးမှာ လား....ဟင်......အနော်လဲ အမှတ်တ၇ .....MEF logo တံဆိပ် ကီးချိန်းလေးကို လိုချင်လို့ပါ.........ဗျာ.......:clap2:
MEF (3) နှစ်ပြည့်အတွက်တော့ ... လောလောဆယ် ဘာမှ မစီစဉ်ရသေးပါဘူး ကို mintunkyaw09 ရေ ...
လက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ MEF ကီးချိန်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .... ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ....
ဖိုရမ်ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ User Name ကိုပြောပြပြီးတော့ ကို သိုးကျောင်းသား (http://myanmarengineer.org/forums/member.php?2249-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8) ဆီကိုဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မမ်ဘာများကီးချိန်း ယူဖို့ရန်ကို yanlinn88@gmail.com မှာ mail ပို့ထားပေးပါ..
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်နေရာကိုပေးရမယ်ဆိုတာလေး ရယ်ပေါ့ .. ကျွန်တော် အားတဲ့အချိန် လိုက်ပို့ပေးပါမယ်..
လူစုဖို့ကျတော့မအားတဲ့သူတွေများနေတယ်...... ယူဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူ့ဆီယူရမှန်းမသိတဲ့သူများ ကျွန်တော်ဆီကိုဆက်သွယ်ကြပါခင်ဗျာ..တတ်နိုင်သလောက်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်..
ကီးချိန်းက ငါးခုလောက်ပဲကျန်တော့မယ်ထင်တယ်အကိုရဲ့ လာယူလိုက်လေ